ကွယ်လွန်သည်အထိ အချစ်စစ်ကို မရခဲ့လေတဲ့ စာရေးဆရာမကြီး ပတ္တမြားခင် ဘဝအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း – WunYan
” သေသည်အထိ သူမ မရခဲ့လေသော ”
မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံး ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ မြန်မာပြည်၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသမီးဓာတ်ပုံဆရာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဥရောပဆန်စွာ အလွန်တရာ လှပခဲ့တယ်။ St. Mary’s Diocesan မှာ သူ့သမီးများ ဖြစ်သော ကေခိုင်ခန့် နဲ့ ကေသီခန့် တို့ကိုကျောင်းကြိုလာတိုင်း မူလတန်းကျောင်းသူ ဘဝကပင် သူ့အလှမှာ မင်သက်ကြရတယ်။
သူမရဲ့နိုင်ငံကျော် ပင်ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ “အတိတ်လမ်း ကို ပြန်လျှောက်ခြင်း” ကိုဖတ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ သူနဲ့ထပ်တူ ကိုယ့်နှလုံးသားတွေ ကိုယ်ချင်းစာမှုနဲ့ တစ်မြည့်မြည့် နာကျင်ခဲ့ရတာ ယခုထိ မမေ့ပျောက်နိုင်ပါဘူး။ အပျိုဖော်ဝင်စ ကာလလေးမှာပင် လူကြီုမိဘများ စီမံမှုအောက် ပြားပြားဝပ်ခါ သူမ လုံးဝမချစ်၊ မနှစ်သက်နိုင်ပါသော၊ ထိုထက် သူမ ဖခင်အရွယ်လည်းဖြစ်ပါသော ကြေးရေတတ် လူကြီးတစ်ဦးကိုရင်ကွဲပက်လက် လက်ထပ်ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုပုဂ္ဂိုလ် ကွယ်လွန်ပြီးနောက် သူမ အလွန်ချစ်မြတ်နိုးမိပါသောသူနှင့်ဆုံဆည်းကာ ဒုတိယအကြိမ် လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ စာရေးဆရာ၊ ဂျာနယ်တိုက်ပိုင်ရှင် တစ်ဦးပါ။ နှစ်အတန်ငယ်ကြာတဲ့အခါ အချစ်ဆိုသော ထိုအရာ၏ ခါးသီးမှုကို အလူးအလဲ ခံစားလိုက်ရရှာပါတယ်။ သူမ အလွန်ယုံကြည်အားထား ရသူနှင့် သူမ အလွန် ချစ်မြတ်နိး ရသူတို့ နှစ်ဦးလက်တွဲကာ သူမ၏ အသည်းကို နောက်ကြောမှဓားထိုးကာ ခွဲလိုက်ကြလို့ပါဘဲ။
အကြောင်းပြချက်ကတော့ “ခင် ” ဆိုသော သူမသည် ရုပ်ရည်၊အရည်အချင်း အစစ ပြည့်စုံကာ ရုပ်ကအစ ဘာဆိုဘာမှမပြည့်စုံရှာသော ထိုမိန်းမကို သနားကရုဏာဝင်ကာ စောင့်ရှောက်လို၍ ပါတဲ့။ မဟာကရုဏာရှင် ယောက်ျားကြီးပေတကား။
နောက်ထပ်…. နောက်ထပ်…. ပုရိသပေါင်းများစွာ…. ဇာတ်လမ်းပေါင်းများစွာ….. သို့သော် သူမ ရှာဖွေသော “အချစ်စစ် ” ဆိုသည်ကိုကားသေသည် အထိ မတွေ့ရှိ၊ မရရှိလေသောအခါ။ ယခုတော့ ဘာမှ မမြဲခြင်း သဘောတရားအရ ဤကမ္ဘာမှ သူမထွက်ခွာခဲ့ရပါပြီ။ သူမကဲ့သို့ သေသည်အထိ မရခဲ့လေသော ဣတ္ထိယပေါင်း ထောင်သောင်းမက ရှိကြမည်သာတည်း။
(ဤစာစုဖြင့် စာရေးဆရာမကြီးဒေါ်ပတ္တမြားခင်အား လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုပါသည်)
၁၉၃၀ ပြည့်နှစ်များဆီမှ စ၍ နှစ်အတန်ကြာ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတွင်(ခန့်ခန့်ကြီး ဓာတ်ပုံတိုက်)ဖွင့်ခဲ့သဖြင့် ဓာတ်ပုံဆရာမ ” ခန့်ခန့်ကြီး” ဟုအလွန်တရာကျော်ကြားခဲ့သော”စာရေးဆရာမကြီး ပတ္တမြားခင် ” ယမန်နေ့ကအမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်တွင်ကွယ်လွန်သွားပါကြောင်း။ အမည်ရင်း ဒေါ်ခင်မကြီးလို့သိရပါတယ်ရှင် ။
Credit : Myo Myint Htwe
စာပေလောကရဲ့ ထင်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ စာရေးဆရာမကြီး ပတ္တမြားခင်ဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ ဖို့ဒ်လော်ဒါဒေးမြို့မှာ ဖေဖော်ဝါရီ၊ (၁၅)ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နေ့လယ် (၁)နာရီခွဲ အချိန်က လူကြီးရောဂါနဲ့ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာမကြီးဟာ စန္ဒာမဂ္ဂ္ဂဇင်းမှာ “သန္တာစမ်းမှ အလွမ်းစာ”ဆောင်းပါးတွေကို လစဉ်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မဟေသီမဂ္ဂဇင်းမှာ “ကင်မရာကိုင်ခဲ့ရ ကျွန်မဘ၀” အခန်းဆက်ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရွှေအမြုတေမဂ္ဂဇင်းမှာတော့ “အတိတ်လမ်းကို ပြန်လျှောက်ခြင်း” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ သူ့ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိကို ရေးသားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးဇာတိသူဖြစ်တဲ့ ဆရာမကြီးကို (၁၉၂၄)ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး၊ အမည်ရင်းမှာ ဒေါ်ခင်မကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၁၉)နှစ်အရွယ်မှာ ”ခန့်ခန့်ကြီး”ဓာတ်ပုံတိုက်ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ (၁၉၅၀) ခုနှစ်က အထက်မြန်မာနိုင်ငံ စာရေးဆရာအသင်းမှာ ဘဏ္ဍာရေးမှူးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၁၉၇၇)ခုနှစ်မှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာမကြီးဟာ ပတ္တမြားခင် ရန်ပုံငွေနဲ့ သူ့ မွေးနေ့ရောက်တိုင်း ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ တဲ့ စာရေးဆရာတွေကို နှစ်စဉ် လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာမကြီး ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက်(၉၅)နှစ်ရှိပြီး၊ သား၊ သမီး (၇)ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်လိုသိရပါတယ်။
Credit : သုံးပန်လှ
ကှယျလှနျသညျအထိ အခဈြစဈကို မရခဲ့လတေဲ့ စာရေးဆရာမကွီး ပတ်တမွားခငျ ဘဝအကွောငျး တဈစတေ့ဈစောငျး
” သသေညျအထိ သူမ မရခဲ့လသေော ”
မွနျမာပွညျ၏ ပထမဆုံး ကိုယျပိုငျကားမောငျးတဲ့ အမြိုးသမီးဖွဈခဲ့တယျ။ မွနျမာပွညျ၏ ပထမဆုံးသော အမြိုးသမီးဓာတျပုံဆရာ ဖွဈခဲ့တယျ။ ဥရောပဆနျစှာ အလှနျတရာ လှပခဲ့တယျ။ St. Mary’s Diocesan မှာ သူ့သမီးမြား ဖွဈသော ကခေိုငျခနျ့ နဲ့ ကသေီခနျ့ တို့ကိုကြောငျးကွိုလာတိုငျး မူလတနျးကြောငျးသူ ဘဝကပငျ သူ့အလှမှာ မငျသကျကွရတယျ။
သူမရဲ့နိုငျငံကြျော ပငျကိုယျရေးအတ်ထုပ်ပတ်တိ “အတိတျလမျး ကို ပွနျလြှောကျခွငျး” ကိုဖတျပွီးတဲ့ အခါမှာတော့ သူနဲ့ထပျတူ ကိုယျ့နှလုံးသားတှေ ကိုယျခငျြးစာမှုနဲ့ တဈမွညျ့မွညျ့ နာကငျြခဲ့ရတာ ယခုထိ မမပြေ့ောကျနိုငျပါဘူး။ အပြိုဖျောဝငျစ ကာလလေးမှာပငျ လူကွီုမိဘမြား စီမံမှုအောကျ ပွားပွားဝပျခါ သူမ လုံးဝမခဈြ၊ မနှဈသကျနိုငျပါသော၊ ထိုထကျ သူမ ဖခငျအရှယျလညျးဖွဈပါသော ကွေးရတေတျ လူကွီးတဈဦးကိုရငျကှဲပကျလကျ လကျထပျခဲ့ရပါတယျ။
ထိုပုဂ်ဂိုလျ ကှယျလှနျပွီးနောကျ သူမ အလှနျခဈြမွတျနိုးမိပါသောသူနှငျ့ဆုံဆညျးကာ ဒုတိယအကွိမျ လကျထပျခဲ့ပါတယျ။ စာရေးဆရာ၊ ဂြာနယျတိုကျပိုငျရှငျ တဈဦးပါ။ နှဈအတနျငယျကွာတဲ့အခါ အခဈြဆိုသော ထိုအရာ၏ ခါးသီးမှုကို အလူးအလဲ ခံစားလိုကျရရှာပါတယျ။ သူမ အလှနျယုံကွညျအားထား ရသူနှငျ့ သူမ အလှနျ ခဈြမွတျနိး ရသူတို့ နှဈဦးလကျတှဲကာ သူမ၏ အသညျးကို နောကျကွောမှဓားထိုးကာ ခှဲလိုကျကွလို့ပါဘဲ။
အကွောငျးပွခကျြကတော့ “ခငျ ” ဆိုသော သူမသညျ ရုပျရညျ၊အရညျအခငျြး အစစ ပွညျ့စုံကာ ရုပျကအစ ဘာဆိုဘာမှမပွညျ့စုံရှာသော ထိုမိနျးမကို သနားကရုဏာဝငျကာ စောငျ့ရှောကျလို၍ ပါတဲ့။ မဟာကရုဏာရှငျ ယောကျြားကွီးပတေကား။
နောကျထပျ…. နောကျထပျ…. ပုရိသပေါငျးမြားစှာ…. ဇာတျလမျးပေါငျးမြားစှာ….. သို့သျော သူမ ရှာဖှသေော “အခဈြစဈ ” ဆိုသညျကိုကားသသေညျ အထိ မတှရှေိ့၊ မရရှိလသေောအခါ။ ယခုတော့ ဘာမှ မမွဲခွငျး သဘောတရားအရ ဤကမ်ဘာမှ သူမထှကျခှာခဲ့ရပါပွီ။ သူမကဲ့သို့ သသေညျအထိ မရခဲ့လသေော ဣတ်ထိယပေါငျး ထောငျသောငျးမက ရှိကွမညျသာတညျး။
(ဤစာစုဖွငျ့ စာရေးဆရာမကွီးဒျေါပတ်တမွားခငျအား လေးစားစှာ ဂုဏျပွုပါသညျ)
၁၉၃၀ ပွညျ့နှဈမြားဆီမှ စ၍ နှဈအတနျကွာ ရနျကုနျအရှပေို့ငျးတှငျ(ခနျ့ခနျ့ကွီး ဓာတျပုံတိုကျ)ဖှငျ့ခဲ့သဖွငျ့ ဓာတျပုံဆရာမ ” ခနျ့ခနျ့ကွီး” ဟုအလှနျတရာကြျောကွားခဲ့သော”စာရေးဆရာမကွီး ပတ်တမွားခငျ ” ယမနျနကေ့အမရေိကနျ ပွညျထောငျစု ဖလျောရီဒါ ပွညျနယျတှငျကှယျလှနျသှားပါကွောငျး။ အမညျရငျး ဒျေါခငျမကွီးလို့သိရပါတယျရှငျ ။
စာပလေောကရဲ့ ထငျရှားသူတဈဦးဖွဈတဲ့ စာရေးဆရာမကွီး ပတ်တမွားခငျဟာ အမရေိကနျနိုငျငံ ဖလျောရီဒါပွညျနယျ၊ ဖို့ဒျလျောဒါဒေးမွို့မှာ ဖဖေျောဝါရီ၊ (၁၅)ရကျ ဒသေစံတျောခြိနျ နလေ့ယျ (၁)နာရီခှဲ အခြိနျက လူကွီးရောဂါနဲ့ ကှယျလှနျသှားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆရာမကွီးဟာ စန်ဒာမဂ်ဂ်ဂဇငျးမှာ “သန်တာစမျးမှ အလှမျးစာ”ဆောငျးပါးတှကေို လစဉျရေးသားခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ မဟသေီမဂ်ဂဇငျးမှာ “ကငျမရာကိုငျခဲ့ရ ကြှနျမဘဝ” အခနျးဆကျဆောငျးပါးကို ရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ရှအေမွုတမေဂ်ဂဇငျးမှာတော့ “အတိတျလမျးကို ပွနျလြှောကျခွငျး” ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျနဲ့ သူ့ကိုယျရေးအတ်ထုပ်ပတ်တိကို ရေးသားခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
မန်တလေးဇာတိသူဖွဈတဲ့ ဆရာမကွီးကို (၁၉၂၄)ခုနှဈမှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး၊ အမညျရငျးမှာ ဒျေါခငျမကွီးဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၁၉)နှဈအရှယျမှာ ”ခနျ့ခနျ့ကွီး”ဓာတျပုံတိုကျကို ရနျကုနျမွို့မှာ ဖှငျ့ခဲ့ပါတယျ။ (၁၉၅၀) ခုနှဈက အထကျမွနျမာနိုငျငံ စာရေးဆရာအသငျးမှာ ဘဏ်ဍာရေးမှူးအဖွဈ လုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။
(၁၉၇၇)ခုနှဈမှာ အမရေိကနျပွညျထောငျစု ဖလျောရီဒါပွညျနယျကို ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဆရာမကွီးဟာ ပတ်တမွားခငျ ရနျပုံငှနေဲ့ သူ့ မှေးနရေ့ောကျတိုငျး ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့ တဲ့ စာရေးဆရာတှကေို နှဈစဉျ လှူဒါနျးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
ဆရာမကွီး ကှယျလှနျခြိနျမှာ အသကျ(၉၅)နှဈရှိပွီး၊ သား၊ သမီး (၇)ယောကျ ကနျြရဈခဲ့တယျလိုသိရပါတယျ။
Credit : သုံးပနျလှ